Ithemba ngokuhweba ezitaladini zedolobha laseMgungundlovu – Sivubela intuthuko Newspaper
UMNU James Martin we-UMEDA, uNdlunkulu Thobekile Maphumulo iMeya yaseMgungundlovu noNkk Melanie Veness abebechaza ngentuthuko yaseMgungundlovu. ISITHOMBE: TSEPO MOLEFE
KULOKOZA inhlansi yethemba kosomabhizinisi abafufusayo baseMgungundlovu abebelobizela ukuhweba emigaqweni yaleli dolobha njengoba izikhulu zo-Umgungundlovu Economic Development Agency (UMEDA) zinezingxoxo nobuholi bakuMasipala waseMsunduzi ngokuhlela kabusha izindawo zokudayisela emigaqweni yaleli dolobha.
Lezi zindaba zidluliswe nguMnu James Martin oyi-CEO ye-UMEDA obehambisana noNkk Melanie Veness yena oyi-CEO yasePietermaritzburg and Midlands Chamber of Business noNdlunkulu Thobekile Maphumulo oyiMeya kuMasipala wesiFunda saseMgungundlovu ezindlini zalo masipala esigcawini nabezindaba lapho obekubukwa khona indima asebeyihambile ekugcineni inhlalakahle esifundeni saseMgungundlovu.
UMnu Martin obonge abalimi abamnyama basemakhaya ngokufaka isandla ngokudla abazitshalela khona okusize kade kuhanjiswa izijumbana kubantu ngesikhathi kuvalwe thaqa izwe ngenxa yeCOVID-19. “Sinezinhlelo ezintsha ezizohlomulisa osomabhizinisi abancane njengoba sizobukeza indlela yokuhweba emigaqweni yedolobha. Sizohlangana nabaseMsunduzi sibheke ukuthi singabambisana kanjani ngoba baningi abantu abafisayo ukuhweba edolobha abangakwazi ngenxa yokushoda kwezindawo zokudayisela. Siyafisa ukubona umnotho wabantu abamnyama usimama njengoba nezwe lethu lidunguzela kwezomnotho kulezi nsuku,” ubeke kanje.
UNkk Veness ukhale ngokubheduka kwe-Corona ethi iphazamise izinhlelo zabo zokugxila kwezamabhizinisi. “Sinezinhlelo ezintsha esizozisebenzisa ngobuchwepheshe besimanje njengoba sifuna idolobha lethu lihlale lisebalazweni elihle kwezokuvakasha okuyizona eziwumgogodla kwezomnotho. Siyacela ukubambisana nabantu ukuze umnotho wethu uhlale uzinzile,” usho kanje.
UNdlunkulu Maphumulo uhlabe ikhwele kubantu abakhele omasipala abawu-7 abangaphansi kowesifunda asengamele ukuba mabafingqe imikhono kuliwe nempi ehlasele emuva kwezibalo ezikhomba ukukhula ngesivinini sabantu abane-corona kulesifunda. Labo masipala ngowaseMsunduzi, owaseMkhambathini, owaseMshwathi, owaseRichmond, owaseMpendle, owaseMngeni nowaseMooi-Mpofana.